Ergooyin Reer Puntland oo shir ku lahaa Garoowe oo la is hor istaagey iyo dhaawac ka dhashey arrinkaas – idalenews.com
Ergooyin Reer Puntland oo shir ku lahaa Garoowe oo la is hor istaagey iyo dhaawac ka dhashey arrinkaas
Waxaa ka baxay Magaaladda Boosaaso ergadii Beesha Cali Saleebaan uga qayb geli lahayd shirka Aayo ka talinta Puntland oo la filayo inuu maalmaha soo socda ka furmo Magaaladda Garoowe .
Dhageyso Wareysiyada qaar ka mid ah Nabadoonnada Puntland
Ergada oo ka koobnayd dhowr & toban oday watayna 3 gaari Abaaro 2:00 duhurnimo waxay gaareen kaantaroolka waqooyi ee Magaaladda Garoowe halkaas oo Ciidamada Amaanku ku joojiyeen kuna wargeliyeen in aysan odayaashu gudaha u geli karin Magaaladda.
Odayaashii waxay weydiiyeen Ciidamadii sababta loogu diidan yahay inaysan Magaalada u gelin waxayna Ciidamadii ugu jawaabeen waa amar naga sareeya waxaana idin ku wargelinaynaa inaad dib ugu laabataan Magaaladda Boosaaso oo aad horay uga timaadeen.
Odayaashii Ergada ahaa waxay ku gacan sayreen amarkii Ciidamada iyagoo sheegay inaysan laaban doonin ayna u gudbi doonaan magaalada oo ay balan ku leeyihiin halkaasna ay kaga qayb geli doonaan dhir dhowaan ka furmi doona oo looga tashanayo aayaha Puntland.
4:00 Galabnimo waxaa soo gaaray Kaantaroolka Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Nugaal & Coll: Cali Daahir Maxamed Saalax oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Nabad sugida kuwaas oo watay 3 gaari oo Tikniko ah.
Markii ay Saraakiishaas & Ciidamadii ay wateen soo gaareen kaantaroolka waxay rasaas ooda kaga qaadeen Odayaashi rasaastaas oo sababtay in xubin ka mid ah ergadii gacan xabadi ka haleesho.
Saraakiishii waxay ku wargeliyeen si deg deg ah in Odayaashu ugu laabtaan Boosaaso hadii kale ay xoog u adeegsan doonaan taas oo ay mar kale odayashu ka dhego adagyeen.
Ciidamadii waxay u yeereen mid ka mid ah Dareewaladii kaas oo ay u geysteen jir dil ba’an waxayna ku amreen inuu dib u celiyo gaariga ay la socotay ergadu waxaana lagu guray ergadii oo qaarkooda katiinad lagu xiray.
Abaaro 5:00 Galanimo waxaa soo gaaray kaantaroolka Ciidamo dheeraad ah odayaashiina waxaa lagu daray 2 gaari oo Tikniko ah kuwaas oo sii kaxeeyey ilaa ay ka dhaafsiiyeen Degmada Dangorayo.
Jawaabta Ergadii Beesha Cali Saleebaan.
Shiine Xaaji Faarax wuxuu ka mid ahaa Ergada Beesha Cali Saleebaan ee maanta laga ceshay Garoowe.
Nabadoon Yuusuf Dube oo ka mid ahaa Ergadii laga soo celiyey galabta Magaaladda Garoowe ayaa khadka taleefanka ugu waramay Horseed Media isagoo markaas marayey inta u dhexeysa Dangorayo & Magaaladda Qardho.
Nabadoon: Dube wuxuu sheegay in si xoog leh looga celiyey Magaalada Garoowe :
“Waxaan ka tagnay Boosaaso galabta ayaan tagnay kaantaroolka Garoowe waana naloo diiday in aanu magaaladda u gudbno ma gelaysaan baa nala dhahay mudaanu meeshii isku haysanay gacan ka hadal buu xaalku gaaray 2 ka mid ah ragayaguna waa dhaawac” Ayuu yiri Nabadoon Yuusuf Dube
Wuxuu canbaareeyey falkii lagula kacay :
“Waxaa nala kula kacay awood sheegashada intaas le’eg Puntland qabaa’il baa degan wax isku darsaday hadii ay wixii ay isku darsadeen sidii ahaan waayeen lagu heshiiyey nin walbaa deegaan buu leeyahay Degaankiisii buuna xiranayaa” Ayuu ku celiyey Nabadoon Yuusuf Dube
Odayaashu waxay ka digeen burbur hadii sida hada wax ku socdaan Dowladu dan moodo iyagoo sheegay in arrintu gaari doonto in Beel waliba Magaaladeeda isbaaro dhigato oo xirato maadaaama Caasimadii Dalka & Dadka ka dhexeysay qolo gaar ah sheeganayso.
Walaac sii kor dhaya.
Waxaa sii kordhacaya walaaca ay ka qabaan xaalada Puntland Dadweynaha, Hay’adaha Qaramada midoobay & Wadamada daneeya Arrimaha Puntland kuwaas oo ka welwel qaba waxa dhici doona marka la gaaro 8 Jan, 2013 oo ay ina ka xigaan maalmo kooban markaas oo ay dhici doonto sharciyada Xukuumadda hada Xafiiska joogta ee uu Hogaanka u hayo Madaxweyne Cabdiraxamaan Faroole maadaama Madaxweynuhu diidan yahay inuu qabto doorashadii Madaxtooyada wakhtigeedii halka Dadweynaha Reer Puntland intooda badan & Siyaasiyiintu ka soo horjeedaan xil kororsiga 1 ka sano ah
Xigashao Horseed Media
Madaxweyne Xasan oo Kenya uga duuley dalka Uganda